Home » Tourism » Ihe kpatara Timeshares ji nwụọ
Ihe kpatara Timeshares ji nwụọ
Timeshare na-adịbu n'okporo ámá n'ihu ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme njem, "ka Andrew Cooper - Onye isi oche nke European Consumer Claims na-ekwu. “Ndị mmadụ na-arịa ọrịa nke ịbata na họtel ndị na-adịghị ka foto ndị mara mma sitere na broshuọ ahụ. Timeshare bịarutere ma nye ha nkwa iji kwe nkwa n'ụkpụrụ klọb na-enweghị atụ. Ọ ga-akwụ ụgwọ karịa, mana ndị mmadụ nwere obi ụtọ ịkwụ ụgwọ.
Ozugbo enweghị ike ịkwụsị ego na-eme ike ụlọ, na-eduga ogehare ụlọ ọrụ na-eji nke nta nke nta na-belata ka inert ulo okụre.
2.Spain nyere iwu iwu siri ike iji chebe ndị ahịa site na ire ahịa dị elu.
3.Timeshare bụ echiche nke oge ya
Anfi Beach Club bidoro ire n’afọ 1992, Puerto Anfi sochiri ya na 1994, Monte Anfi n’afọ 1997, na Gran Anfi n’afọ 1998. Anfi Del Mar, nke gụnyere klọb niile anọ wee mebie ndekọ ndekọ saịtị ọ bụla na ụlọ ọrụ timeshare na-esote. iri abụọ
Onye nwe obodo Billion nke Bjørn Lyng hiwere Anfi ka ọ bụrụ ọrụ ikpeazụ ya, ebe o meworị akụ na ụba ya na ụlọ ọrụ. O doro anya na Anfi kachasị mma oge mmepe ụwa: A na-ebubata aja sitere na Caribbean iji mepụta ụsọ osimiri na-acha ọcha, e mepụtara agwaetiti nwere obi obi 200 mita nke ejiri ahịhịa ahịhịa na ahịhịa mara mma chọọ, marina na ubi. na-enwu nke mmiri na iyi mmiri na-ekele ndị ọbịa ọma
Site na otu ndị ahịa dị ike 200 na ọnụọgụ yiri OPC (touts) gbasaa na Gran Canaria Anfi bụ eriri ebu ego. Ọtụtụ mmadụ bara ọgaranya nke ukwuu
Na Jenụwarị 5th 1999 iwu ahụ gbanwere mana Anfi, n'okpuru nduzi nke Calvin Lucock (na onye ahịa / onye isi ahịa / azụmaahịa Neil Cunliffe) agbanweghị.
Spain tinye iwu iwu oge iji chebe ndị ahịa nrụgide dị elu ọrịre. Anfi, tinyere ọtụtụ ebe ntụrụndụ ndị ọzọ, họọrọ ileghara iwu ọhụrụ ahụ anya. Eleghi anya, egwu nke ego nwere ike ịba ụba karịa ụjọ nke nsonaazụ iwu, na nwa oge enweghị mmetụta ọ bụla gosipụtara.
N'ezie, ọ bụ ezie na Calvin, Neil et al nwere ike ọ gaghị amata ma anyanwụ amaliteworị ịwụda na ụbọchị 'Wild West' nke Anfi. Egwuregwu ahụ nwere ike ọ gaghị agafe naanị, mana ha ji oge gbaziri.
N’afọ 2015, ikpe mbụ e kpere Anfi ruru Courtlọikpe Kasị Elu na Spen. Anfi anɔpa kosi anwummere. A na-amanye Anfi na-akwụ ụgwọ ugbu a akwụ ụgwọ ndị nwe ha na nkwekọrịta nkwekọrịta na-akwadoghị.
Anfi nwere ihe karịrị € 48 nde na ikpe megide ha ruo ugbu a. E boro ha ebubo na ha bụ ndị omekome (mana ha amịtaghị mkpụrụ) na-ezobe akụ iji zere ịkwụ ụgwọ.
Klọb la Costa
Roy Peires meghere Club La Costa na 1984 mgbe ọ zụrụ ezumike mbụ ya, Las Farolas, na Costa del Sol. Peires gbasaa ngwa ngwa na 1980s na 1990s. Na 2013 ọ gụgharịrị aha ya dịka CLC World Resorts & Hotels.
Ugbu a enwere ebe ntụrụndụ 32 CLC World, gụnyere ezumike ezumike, ụgbọ mmiri okomoko na ụgbọ mmiri canal.
Roy Peires na-achịkwa njikwa nke mmepe na ntuziaka nke CLC. Peires, onye sitere na South Africa, gbara afọ 70th ụbọchị ọmụmụ afọ a na egosighi ihe ịrịba ama nke ịkwụsịlata.
CLC World, dị ka Anfi, họọrọ ileghara iwu ọhụrụ ahụ anya. Ha na-akwụkwa nnukwu ụgwọ. Ruo ugbua ihe ruru € 20 nde akwụ ụgwọ enyerela ụlọ ọrụ ahụ, akụkụ buru ibu nke ndị European Consumer Claims (ECC) meriri n'aha ndị otu CLC rere.
CLC ụwa chụpụrụ ndị ọrụ ya na Ọktoba 2020, na mbido “ruo oge ọzọ”. Obere ọnwa ka e mesịrị, ha mechiri ndị ahịa ha ruo mgbe ebighị ebi ma tinye Club la Costa (UK) PLC n'ime nchịkwa.
Izu ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ anọ nke CLC na Spain malitere ịmị mmiri; Ọ bụ ezie na CLC gwara ndị nwe ya na agaghị emetụta ndị otu ha, ọrụ ahụ kpatara nchegbu n'etiti ndị otu CLC na ndị na-ekiri ya maka ọdịnihu nke klọb ahụ
Njirimara Resort Resort, Silverpoint rere oge ihe nkiri na Hollywood Mirage Club, Beverly Hills Heights, Beverly Hills Club, Palm Beach Club na Club Paradiso niile na agwaetiti Tenerife.
Njirimara Resort bidoro afọ asatọ ahụ site n'aka onye ọchụnta ego Britain bụ Bob Trotta, onye na-agba ọsọ na onye ahịa Danny Lubert, tupu ha ahapụ ịmepụta Group mbụ na Dubai
Mark Cushway na-eduga ugbu a na Njirimara Resort, na mgbe ahụ Silverpoint Vacations.
Cushway were ụlọ ọrụ daa n'ụzọ nke na-enyo atụmatụ "itinye ego" (nke a na-akpọ ELLP) metụtara oke nke uru ụlọ site na otu ụlọ oriri na nkwari akụ. Uru ndị a bara uru maka afọ mbụ na-agba ndị nwere ume ume ịbawanye ala. Mgbe agba nke abụọ nke itinye ego, ụlọ ọrụ ahụ banyere mmiri mmiri. Ndị investors tụfuru ihe niile.
Silverpoint leghaara iwu iwu Spanish anya. E nwere ọtụtụ narị ikpe megide ha mana mkpofu ha nyere iwu pụtara na ọtụtụ ndị ahịa ikpe ụlọ ikpe n'agbanyeghị na ha meriri n'ụlọ ikpe, anatabeghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ ha.
Silverpoint na-aga maka ọdachi ego site na mgbe ụlọ ikpe bidoro inye ha ikpe. Ikekwe atụmatụ ELLP bụ njide ego ikpeazụ, mgbe ha maara na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'okpuru agbanyeghị
A maara ebe ntụrụndụ Diamond maka ngwaahịa dị mma na ụfọdụ ebe ntụrụndụ pụrụ iche na USA. Mgbasa ha gbasoro na Europe na Europe na-enyekwa ebe obibi na-ere ahịa na-achọsi ike.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ 50 na Europe, Diamond bụ otu n'ime ndị kachasị ibu nke ụlọ ọrụ ahụ, n'otu oge a na-ahọpụta ụlọ ọrụ 8th kasị ukwuu na ụwa
Ogo a, ike na aha nke Diamond Resorts nyere ndị na-azụ ha na Europe ụfọdụ nchebe siri ike na ntụkwasị obi metụtara njide ezumike.
Na Nọvemba 2017, a kpọkọtara ndị ahịa na ndị ọrụ nchekwa niile gaa nzukọ n'ọtụtụ ebe gburugburu Europe, niile n'otu oge. Naanị izu asaa tupu ekeresimesi, a gwara ndị ọrụ na mpaghara Diamond nke Europe ka ha kpochapụ tebụl ha ma kwadebe maka imechi ọfịs.
Salesgha ahịa bụ akụkụ nke nsogbu ahụ, mana ngwaahịa na-ezighi ezi na-egosipụta nsogbu n'ọdịnihu na ndị ahịa na-alọghachi.
Nkwụnye ụgwọ nkwụghachi ụgwọ maka nkwekọrịta nkwekọrịta na-ezighi ezi na ebe ntụrụndụ Spanish mechiri akara aka nke Diamond ịga Europe
Diamond Europe ka na-ejigide ndị na-ere ahịa n'ụlọ n'ụlọ pere mpe na ebe ezumike ha n'okpuru nkwekọrịta aha, mana ọ nweghị ihe dịka ọnụọgụ ụbọchị halcyon nke 1980s na 1990s.
Echiche nke oge ya gabigara
Timeshare dị ọhụụ ma na-atọ ụtọ, nwata na-etolite etolite echiche njem njem siri ike, na-emebi ụdị njem njem ọkọlọtọ.
“N’ụzọ dị mwute, onye nwe ụlọ ahụ bịara dị umengwụ. Ihe nlere a bu ihe nlere anya na ndi ozo nke mba njem obughi soso, kamakwa weghara timeshare nke onwe ya buzi ihe mgbe ochie.
“Ahịa ndị ọhụrụ amatala. Ndị otu oge dị ugbu a na-achọsi ike ịgbanahụ nkwa ahụ. Azụmaahịa dị ka ọ si dị enweghị ọdịnihu.